कार्बोहाइड्रेटलाई वन्देज गर्दा यस्ता समस्याहरूबाट पीडित बन्नुपर्ने हुन्छ, कसरी ? जानी राखौँ – Etajakhabar
कार्बोहाइड्रेटलाई वन्देज गर्दा यस्ता समस्याहरूबाट पीडित बन्नुपर्ने हुन्छ, कसरी ? जानी राखौँ
ताजा खबर:- कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजनको मिश्रण हुन्छ । यो ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हुन्छ, जुन हाम्रो शरीरको लागि निकै आवश्यक हुन्छ । क्यालोरी अधिक हुनुको कारणले प्रायजसो वजन कम गर्ने मानिसहरूलाई कार्बोहाइड्रेट खान मनाही हुन्छ या कम खाने सल्लाह दिने गरिन्छ । तरपनि कम कार्बोहाइड्रेटको सेवन पनि हाम्रो शरीरमा विभिन्न समस्याको कारण बन्न सक्छ । शारीरिक र मानसिक सक्रियताको लागि कार्बोहाइड्रेट निकै आवश्यक हुन्छ । आज हामी चर्चा गर्दैछौँ कि यदि तपाईले कार्बोहाइड्रेटको सेवन गर्न छोड्नुहुन्छ भने तपाई कुन-कुन समस्याहरूले पीडित बन्नुपर्दछ, जुन यसप्रकार छन् ।
कब्जियत- कार्बोहाइड्रेटको नै एक प्रकार हुने गर्छ फाइबर । शरीरमा पाचन सम्बन्धि समस्याहरूबाट आराम दिलाउन यसको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । यदि तपाईको आहारमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम हुन्छ भने यसको अर्थ शरीरमा प्रयाप्त मात्रामा फाइबर पुगिरहेको छैन । यस अवस्थामा कब्जियत र पाचन सम्बन्धि अन्य समस्याहरूको खतरा निकै बढ्छ ।
वजनमा कमी आउनु- कार्बोहाइड्रेट एनर्जीको राम्रो स्रोत हुन्छ । यसको शरीरमा कमी हुनुको कारणले शरीर एनर्जी मांसपेशीबाट लिन शुरू गर्छ, जसको कारण वजनमा कमी आउन थाल्छ । यसकारण मोटोपनले ग्रसित मानिसहरूको लागि कार्बोहाइड्रेट सेवन नगर्न सल्लाह दिने गरिन्छ ।
थकान- कार्बोहाइड्रेटको कमीको कारणले शरीरमा उर्जाको आपूर्ति निकै कम हुन्छ । यस आवस्थामा थकान, कमजोरी र चक्कर आउने जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ । सधैँ सक्रिय रहनका लागि कार्बोहाइड्रेटको सेवन निकै आवश्यक हुन्छ ।
डिप्रेशन- कार्बोहाइड्रेटको कारणले दिमागले सेरोटोनिन नामक हार्मोनलाई नियन्त्रित गर्छ । यदि हामी पर्याप्त मात्रामा कार्बोहाइड्रेट लिन कम गर्छौँ भने सेरोटोनिनको आपूर्ति कम हुनुको कारणले डिप्रेशन जस्ता रोगहरूको खतरा बढ्छ ।
टाउको दुख्ने- कार्बोहाइड्रेटको कमीले शरीरले ऊर्जाको लागि मसल्सलाई बर्न गर्न शुरू गर्छ । यस्तो अवस्थामा केटोन नामक एसिड उत्सर्जित हुन्छ । जसको कारणले टाउको दुख्ने, उल्टी र श्वासको दुर्गन्धको समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक २४, २०७४ समय: ०:५२:०४